PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-11 - Uvavanyo: 2018 Haval H6 C
Uvavanyo: 2018 Haval H6 C
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-11 - EZEMOTO NEENCWADI - SISANDA MBETE
KWINQANABA leeMedium-sized SUV, umthengi unenqwaba yokhetho kuluhlu lweentlobo ngeentlobo zazo. Ingxaki iye ibe khona xa umntu eqwalasela amaxabiso ezi moto ngoku, ubone ukuba sekunzinyana ukufikelela kuzo ungatshonanga nzulu empokothweni.
Kulapho abaseChina badume ngako, ukunika umthengi le nto inye, kodwa ixabiso lithande ukuncumisa noko. Bangena apha ke abakwaHaval, ikhono lobucwebe lomzimveliso wakwa-Great Wall Motors (njengodlelwano lweLexus noToyota, okanye Infiniti noNissan, okanye Acura noHonda).
Sekuyiminyaka emininzi ngoku uHaval ekhokela ngamanani okuthengisa ezona zininzi iiSUV ilizwe jikelele, nto nje bebethengisa kwilizwe laseChina kuphela.
Ngoku bolula iingalo nemilenze bangena kwiimarike ezithile ababona ukuba iimoto ezinjengee-SUV ziya ngokuxhaphaka. IMzantsi ikwelo qela lamazwe aya ngokuthenga iiSUV isikakhulu kunezinye iintlobo zeemoto.
Siyasazi sonke ke isimo somnotho kula malanga eMzantsi, kwaye sonke sikhangela iindlela zokulondoloza iimali zethu singatshintshanga izinga lokuphila. Kweli nqanaba lee-mediumsized SUV, iHaval H6 C inika abathengi iSUV enako konke owunokukufuna ngexabiso elibhetele kunezinye ekhuphisana nazo kule marike, ezifana neeToyota RAV4, VW Tiguan, Hyundai Tucson neMazda CX-5.
Kuninzi okufumaneka kwiH6 C ungakhuphanga mali engaphaya kwexabiso elipapashiweyo encwadini. Ukhetha nje phakathi kwe-6-speed manual ne-6 Speed Dual Clutch Transmission eziza ngezinxibo ezintathu – City, Premium neLuxury.
Kwisinxibo seCity sewufumana i-electric power steering, iimpondo zokuqhuba ezi-4-way adjustable futhi zambathiswe ufele, iifestile zombane zonke ezikwazi ukungaminxisi iminwe, izalathiso zokupaka ngasemva nangaphambili ezikhatshwa yi-reverse camera, Hill Ascent & Descent Control, 3-zone climate control, interior ambient lighting, speed sensitive central locking, necruise control.
Kwisinxibo sePremium kongezwe amavili angumxube weentsimbi e-19inch, izitulo zofele olumnyama, izitulo zangaphambili ezilungiswa ngombane ngeendlela ezisibhozo kumqhubi nangayi-4 kumkhweli, tyre pressure monitoring, neengxowa zokhuseleko ezintandathu.
Kwisinxibo seLuxury ufumana uphahla lwefestile (panoramic sunroof), ikhamera ebonisa icala lasekhohlo, nezibane zangaphambili ze-xenon.
Injini inye kwiHaval H6 C. Le yi-2.0 litre yepetroli ena-140kW/310Nm. KwaHaval bathi ifanele ukukunika 9.8lt/100km ukurhabula ithontsi, kodwa thina kuvavanyo asikwazanga tu ukuyehlisa ngaphantsi ko-11.9lt/100km. Oko ke kuthetha ukuba ithande ukunxanwa le njini, sitsho nangoko besinganyatheli ngobundlobongela iveki yonke ikuthi.
Xa uthelekisa nezinye iimoto ekhuphisana nazo, unganyanzeleka ukhuphe ngaphaya kwekhulu lamawaka eerandi ukuze ungene kwezinye ezinika ubuntofo obufumaneka apha kwi-H6 C. Kanjalo ke ungayixolela ukurhabula kwayo etankini.
Silithande mpela ixesha lethu nale moto yaseChina. Siyacinga ukuba izokuthengisa ngobuninzi bazo apha eMzantsi, futhi asinaxhala lokuba ulwakhiwo lwayo luzokuhlala luncomeka ngaphaya kweminyaka emihlanu isendleleni xa kuphela iwaranti yayo.
Amaxabiso: H6 C City 6MT - R329 900 H6 C Premium 6MT - R349 900 H6 C Luxury 6MT - R369 900 H6 C City 6DCT - R359 900 H6 C Premium 6DCT - R379 900 H6 C Luxury 6DCT - R399 900 Zonke iiHaval H6 C zikhatshwa yiWarranty ye-5 years / 100 000 km.